အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: NAB
အဆိုပါရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးသံသယကြီးမားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာထိရောက်မှုတစ်ခမ်းနားစကေးပေါ်တွင်မျှဝေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်သူအများအပြားရေဒီယိုပညာရှင်များအဘို့ဖန်တီးမှုပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုစိန်ခေါ်မှု, သေးသောအညီအမျှဆန်းသစ်ကုမ္ပဏီကြီးမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်၏စကားသံအဖြစ်, NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) အရာ၌နန်းထိုင်လိုက်ပါတယ် ...
တိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းယင်း၏စိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်, အဲဒီစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ၏အစိတ်အပိုင်းကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအနာဂတ်မှာကိုင်စွဲဖို့အလိုက်အထိုက်နေတတ်ရှိပါတယ်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုအဆက်မပြတ်ဆိုစက်မှုလုပ်ငန်း titan များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သံသရာကိုသရုပျဖျောဖို့အလုပ်လုပ်တယ်တစ်ခုမလွှဲမရှောင်အချက်ဖြစ်တယ်, သော 2019 ရေဒီယိုပြရန်၏မောင်းနှင်မှုကျောက်ဆူးကဒီကျဆုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ 2019 ရေဒီယိုပြပါလိမ့်မယ် ...
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကငါးနှစျတှငျ, podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အမျိုးမျိုးသောနောက်ခံ၏ podcast များအတွက်အဆုံးစွန်နှစ်ပတ်လည် destination သို့ဖြစ်လာရန်ကြီးထွားလာအတွက်ကောင်းစွာပြုတော်မူပြီ။ Podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့လည်းအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေ Podcasts မှထူးခြားသောပညာရေးနှင့်ကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Podcast တခုကိုကြီးထွားဖို့ကြိုးစားနေ, ဒါမှမဟုတ်, တဦးတည်းပါလိမ့်မယ် စတင်. ၏လုပ်ငန်းစဉ်၌တည်ရှိ၏သူမဆို podcast ...
တစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးကြောင်းရုပ်ရှင်လုပ် Hawk ရဟတ်ယာဉ်-ဝုဒ်အင်အားကြီး Nadu ရုပ်ရှင်မစ်ရှင်
ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ဂျနီဖာလောရင်ဖောင်ဒေးရှင်း Louisville က, Nadu ရုပ်ရှင်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် "ဟုခြားနားချက်စေဇာတ်ကားတွေအောင်။ " ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအလေးပေးကီ-based ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အာဖရိကအရှေ့နိုင်ငံများသို့သန့်ရှင်းသောရေကိုဆောင်ခဲ့ NFL ကစားသမားခရစ် Long ကရိုက်ကူးထံမှ ကောင်းသောများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေကြောင်းပုံပြင်များပေါ်မှာ။ သူတို့ကရိုက်ကူး feature ကိုရုပ်ရှင်ကနေအရာအားလုံးတိုရုပ်ရှင်အဖြစ်မြှင့်တင်ရေးပြုသောအမှုဖွင့် ...
ရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Workflows (THE PPC)
ဦးဆောင် Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုအိမ်ရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ (THE PPC), ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှုအေဂျင်စီများတစ်ဦးနှင့်စတူဒီယိုတစ်ခုဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဘို့ပါဝါအဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယို Workflows ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သ Market က Ooyala ဖို့အချိန်လျှော့ချ, မဟာလုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုသည် Ooyala မှနှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖန်တီးမှုနှင့် post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှု။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကျော်ဘို့အကြောင်းအရာတစ်နှစ်၏ 25,000 အပိုင်းပိုင်းကျော်ထုတ်လုပ် ...
Vislink Technologies ကမိတ်ဆက်ပေါင်းစည်း 4k ကြိုးမဲ့ကင်မရာ transmitter ယူနစ် Sony ရဲ့နယူး Multi-Format ကိုတိုက်ရိုက်ကင်မရာစနစ်များအတွက်
HACKETTSTOWN, NJ, ဧပြီ 8, 2019 - Vislink Technologies က (Nasdaq: VISL) က၎င်း၏ INCAM-HS Sony ရဲ့အသစ်က HDC-5500 4K Multi-format နဲ့တိုက်ရိုက်ကင်မရာစနစ်ထဲကိုတညျဆောကျထားတဲ့ကြိုးမဲ့ကင်မရာ transmitter ကို, ပေါင်းစည်းမိတ်ဆက်။ Vislink Technologies က '' INCAM-HS အပြည့်အဝ HEVC 4K UHD ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး encoding ကအဖြစ် 1080p, 1080i နှင့် 720p ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးအပေါင်း built-in ကြိုးမဲ့ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုနှင့် HDR ကိုထောက်ခံကြောင်း။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်မှာခင်းကျင်းပြသသည် ...
Ooyala မိတ်ဆက် Integrated နှင့် Google Cloud ကိုဗီဒီယိုထောက်လှမ်းရေး, Avid မီဒီယာ Composer နှင့် Teravolt များအတွက် Workflows
နောက်ဆုံးရ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း Integrated ပါဝါပိုချွေ Multi-Platform ဖြန့်ဖြူး Ooyala, အကြောင်းအရာကွင်းဆက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, NAB 2019 မှာယင်း၏ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအသစ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အား features တွေတို့တွင် Ooyala တဲမှာမီးမောင်းထိုးပြ - #SV1000 - ထို Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းယခု Google မိုးတိမ်ဗီဒီယိုထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ...
ပွဲဦးထွက် JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်တွင်ဆက်သွယ်ရေး Securities ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များကိုမြင်ယောင်ကြည့်
SMPTE ST 2110 မွေးစား Las Vegas, ဧပြီ 7, 2019 မြှင့်တင်ရန်လေးစားလိုက်နာင့်လင်းမြင်သာ - မီဒီယာနည်းပညာ IP ချိတ်ဆက်ဆီသို့ချီတက်ပွဲအတွက်ရှေ့ဆက်တစ်ဦးကအဓိကခြေလှမ်းကတော့ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်လကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ယက်ကိုမီဒီယာပေါ်ပူးတွဲ Task Force (JT-မိုင်) IP ကို-connected devices များအကြားပြည့်စုံအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆီသို့လမ်းပြမြေပုံကိုထုတ်မသတ်မှတ်ထားပါတယ် ...
tpc ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးကနေ IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံခန့်သွက်လက်စတူဒီယိုရေးစင်တာဆောက်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, UHD-နိုင်စွမ်းထရပ်ကား၏အောင်မြင်မှုသည်အောက်ပါယခုဆွစ်ဇာလန် Las Vegas, ဧပြီ7အတွက် Metechno စီမံကိန်းကိုမှာသစ်ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက်အလယ်ဗဟိုများအတွက် IP ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, 2019 - ဆွစ်ဇာလန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ကုမ္ပဏီ tpc, အဓိကဆွစ်ဇာလန်အများပြည်သူမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ SRG SSR, ဇူးရစ်အတွက်သတင်းများ, အားကစားနှင့်နည်းပညာစင်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ built ဒါဟာ All-အိုင်ပီစင်တာ ...
ဆက်သွယ်ရေး Customer များဟာသူတို့ရဲ့အသံလွှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဘဝအသက်တာအမြင့်ဆုံးကူညီပေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
တစ် software ကိုဗဟိုပြုဖို့သူတို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့စီစဉ်နေချိန်တွင်၎င်းတို့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပျသူကုမ္ပဏီများကထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာမှတုန့်ပြန်မှာတော့ - All-လက်ခံထောက်ခံမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု Las Vegas, ဧပြီ 7, 2019 များကိုခံတပ် Solutions နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အစီအစဉ်သစ်ထုတ်လှိမ့် အိုင်ပီအနာဂတ်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုလုံး-အခြေခံအဆောက်အအုံစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကမ်းလှမ်းရန်ခံတပ် Solutions နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ...
FilmLight ProRes RAW ဇာတိထောက်ခံမှုမိတ်ဆက်
လန်ဒန် -6ဧပြီလ 2019: အဓိက Baselight software ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း, ဗားရှင်း 5.2 နှင့်လငျးယခု ProRes RAW format နဲ့မှဇာတိ access ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်လျှောက်လွှာကနေ ProRes RAW format ကို၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့် ProRes RAW image ကို format နဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းမှကင်မရာများအပေါ်ယခုရရှိနိုင် ...
TSL ကုန်ပစ္စည်းများ NAB 2019 မှာပိုမိုစုံလင်လာမယ့် '' IP ကိုလမ်းတွင်ပြသသည့် '' များတွင်ပါရန်
Las Vegas, ဧပြီ 5, 2019 - TSL ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ပိုမိုစုံလင်, တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ပေးသူများကလက်ခံထားသော, NAB မှာ "အိုင်ပီလမ်းတွင်ပြသသည့်" ပြပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနေသည်။ လက်ရှိအစပျိုးမှု, ကင်မရာများ, မော်နီတာ, ထိန်းချုပ်မှုပြားနဲ့ Two-ထိန်သိမ်းကိရိယာအစုံ၏အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ယခုနှစ် NAB မှယူဆောင်ပါလိမ့်မည် ...
အဆိုပါ 50 NAB Show မှာ Wisycom မိတ်ဆက် MPR2019-IFB စစ်မှန်သော-မတူကွဲပြားခြင်း Receiver
Las Vegas, ဧပြီ 5, 2019 - Wisycom NAB 50 (Booth C2019) မှာ၎င်း၏အသစ်အ MPR856-IFB စစ်မှန်သောမတူကွဲပြားခြင်း Receiver မိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ခါးပတ်-pack ကိုစတိုင်လက်ခံ features တွေ, IFB application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ wideband Wisycom ရဲ့စီးပွားဖြစ် ENR သို့မဟုတ် ENC algorithm ကို, နှင့် + 232dB တစ်အထွတ်အထိပ်မှ headroom တိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ထုံးစံနားကြပ်အသံချဲ့စက်ကနေတဆင့် 23MHz, Multi-companding အပြောင်းအလဲနဲ့မှတက်စာ။ ရှိသမျှနှင့်အတူအမျှ ...